Jereo ny Lahatsarim-Panadihadiana Miresaka ny Fiantraikan’ny Fikorontanan’ny Toetrandro Amin’ny Fiainana Andavanandron’ny Vazimba Teratanin’i Xingu · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2016 4:13 GMT
Ny lahatsoratra dia nivoaka voalohany tao amin'ny habaky ny Instituto Socioambiental. Ary nivoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Manodidina ny 6500 ankehitriny ny Indiana avy amin'ny foko 16 samihafa monina ao amin'ny Valan'ny Tompontanin'i Xingu, miorina ao amin'ny Fanjakana Mato Grosso, faritra afovoany andrefan'i Brezila. Noho ny rafitra nentin-drazana eo amin'ny fitantanana ny tany, dia ry zareo no miantoka ny fiarovana ny ala. Na izany aza, hafa ny zavamisy ao amin'ny Vala: efa nivadika ho toeram-pambolena saozaha, katsaka ary fihinanan'ny biby ny 86%-n'ny ala tao anatin'ny 30 taona farany. Tsapan'ny Indiana ny fiantraikan'izany eo amin'ny toetrandro, ny biby ary ny fambolena.
Avy amin'ny lahatsora-sarimihetsik'i Paulo Junqueira, avy ao amin'ny ISA, sy i Mari Corrêa, avy ao amin'ny Ivontoerana Catitu, izay taleny ihany koa, asehon'ny lahatsarim-panadihadiana fohy “Para onde foram as andorinhas?” [Taiza ny sidintsidina?] ny fahatsapan'ireo olona monina ao amin'ny Valan'ny Teratanin'i Xhingu ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetrandro ao amin'ny fiainana andavanandron'izy ireo — eo amin'ny sakafo, eo amin'ny rafitry ny fitodihana ao anatin'ny fotoana, eo amin'ny kolontsain-dry zareo sy ny fombafomban-dry zareo.
Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'i ISA sy ny Ivontoerana Catitu izay [n]avoaka mandritra ny Fivoriambe momba ny Toetrandro tao Paris (COP-21), nahazo loka ny filma tao amin'ny Fetiben'ny Sineman'ny Tontolo Iainan'ny Vondronosy Canárias sy ny Fetibe Entretodos ny Zon'Olombelona. Ary ankehitriny dia efa azo jerena ato amin'ny aterineto ihany koa.
Tsy mihira intsony ny jorery. Lasa ny lolo sy ny sidintsidina
Hita na aiza na aiza ny marika. Tsy mihira intsony ny jorery manambara ny orana ho avy. Nanjavona ihany koa ny roboben'ny sidintsidina hanambara ny fanombohan'ny vanim-potoanan'ny orana. Lasa ireo lolo mitsidika ny tanàna mampitandrina fa efa manomboka mihamaina ny renirano. Tsy izany anefa no nitranga taloha, hoy ry zareo. Fa ny hafanana mihamiakatra, ny tsy fahampian'ny orana, ny fahalevonan'ny ala manodidina ny Vala ary ny fananganana ireo tohodrano no heverina ho niteraka ireo fiovana ireo. Mora miely vetivety ny afo voafetra teny an-tsaha taloha, ka mahatratra velarantany goavan'ny vala, ka mahatery hanetsika ny Indiana handray teknika sy fitaovana vaovao ifehezana ny afo.
Mamono tsikelikely mampanjavona ny voankazo sy ny sakafo ao anatin'ny nahandron'ny vahoakan'i Xingu ihany koa, eo amin'ireo karazana mangahazo sy ovy, ny hafanana tafahoatra. Tafihan'ny karazam-bibikely tsy fantatry ny mponin'i Xingu ihany koa ny fototra pequi, loharanon-tsakafo sy fototry ny fombafomban-tevin-tsofina Waurá. Sahiran-tsaina ry zareo ary mihevitra fa ho noana any amin'ny fotoana hoavy any satria tsy haharitra intsony ny fambolena izany. Ary manahy ry zareo fa tsy maintsy hiankina amin'ny sakafo fotsy ihany ny taranaka rahampitso.